Senator Cabdi Qaybdiid “Dalkaan oo aan yeelan Maxkamad Dastuuri ah Khilaafka dhamaan mayo” – Kalfadhi
Senator Cabdi Qaybdiid “Dalkaan oo aan yeelan Maxkamad Dastuuri ah Khilaafka dhamaan mayo”
Sanatar Qaybdiid oo ka hadlaya kulanka
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid Guddoomiyaha Guddiga dib u Eegista Dastuurka oo ka hor hadlay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay halka uu marayo dib u Eegista Dastuurka Kumeel gaarka ah ee Soomaaliya.
Cabdi Qaybdiid ayaa sheegay in uu ku guuleestay 10 Cutub oo kamid ah Dastuurka in ay ku sameeyaan dib u Eegis islamarkaana ay u dhiman tahay 5 Cutub oo kaliya dhawaana ay soo wareejin doonaan dib u eegistii ay sameeyeen Guddiga dib u Eegista Dasuurka Soomaaliya.
“Waxaan ku guulaysanay in aan dib u eegno 10 Cutub oo dastuurka kamid ah waxaana noo harsan 5 cutub dhawaan ayaa ka dhamaan doonaa” ayuu yiri Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo la hadlay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdi Xasan Caawale Qaybdiid ayaa sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay in la helo Maxkamad Dastuuri ah hadii aan la helina uusan dhamaan doonin Khilaafka mar kasta soo kala dhaxgala hogaanka Soomaaliya
“Hadii aan dalkaan loo helin Maxkamad dastuuri ah ma dhamaan doono khilaafka hogaanka dalka iyo is qab qabsiga awoodaha” ayuu yiri Cabdi Qaybdiid Guddoomiyaha Guddiga dib u Eegista Dastuurka Soomaaliya.
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay in guddiga ay wajahayaan caqabado badan islamarkaana uu saameyn balllaaran ku yeeshay Khilaafka labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo soo taagnaa mudooyinkii ugu dambeeyay.
“Caqabado badan ayaa wajahaynaa, waxaana saameynta ugu wayn nagu yeeshay Khilaafka labada Gole ee baarlamaanka Soomaaliya” ayuu yiri Senator Qaybdiid. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa codsaday in labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ay ka heshiiyaan waxyaabaha dhaxyaala si ay usii socoto shaqada Qaranka. “Waxaan ku baaqayaa in labada Guddoomiye ay xaliyaan mad madowga u dhaxeeya Baarlamaanka” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid.
Xildhibaan Xuseen C.Ciise” Meel xun ayuu marayaa wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana ku laaban doonaa Soomaaliland”
Guddoomiye Muudeey “Dastuurka sax ma noqon karo inta Soomaaliland maqantahay”